Waxa Hadda ka Socdo Degmada SPPS - May 14, 2020
Xogta soo Qaadashada Alaabta idinka Taallo Iskoolka
Maadaama uu Guddoomiyaha Gobolka Minnesota soo saaray amar lagu xirayo dhammaan iskoollada inta ka harsan sannad-dugsiyeedka si loo xakameeyo faafidda xanuunka COVID-19, waxaa dhismaha iskoolkeenna yaallo alaab iyo sheeyaad ay ardaydu leeyihiin.
Degmada Saint Paul Public Schools waxay sameysay qorshe lagu celinayo alaabta ardayda ee iskoolka looga tagay inta aan la xirin. Qaabka loo soo qaadanayo alaabtaan waxay noqon mid habsami loo abaabulay iyadoo la raacayo tilmaamaha kala fogaanshaha dadka.
Alaabta ardayda ee looga tagay meelaha wax lagu xareysto ee Iskoolka iyo wixii daawo ama qalab daawo ah ee yaallo xafiiska caafimaadka (Health Office Student) waa la uruurin oo qof shaqaale ah ayaa bac ku ridi doono, ka dibna magaca ardayga ayaa lagu qori doonaa si aad u qaadataan. Arday ama qoys looma oggolaan doono inay soo galaan gudaha iskoolka si ay u qaataan sheeyaadka ay leeyihiin.
Jadwalkan maalmaha iyo saacadaha alaabta laga soo qaadanayo iskoolka cunuggaaga waxaa idiin soo sheegi doono maamulihiinna. Qorshe ahaan, waa sidan qaabka loo soo qaadanayo alaabta taaallo iskoolka:
K-5th: ​May 18-22
6th-11th: May 26-29
Ardayda dhigato fasalka 12-aad: June 5 - 8
Qoysasku ha ku jiraan gaarigooda, hana raacaan calaamadaha ku tusayo sida loo galo baarkinka iskoolka, oo ka dibna leen ha galaan si laguugu keeno alaabta ardaygaaga. Faahfaahin quseysa qaabka alaabta looga soo qaadanayo iskoolka cunuggaaga waxaa idiin soo sheegi doono maamulaha iskoolkiinna.
Haddii aad u soo lugeysid iskoolka, fadlan raadi calaamado ku hagayo oo imow miiska la iska qoro. Fadlan raac tilmaamaha kala fogaanshaha dadka, oggolow in ugu yaraan lix tallaabo aad u jirsatid dadka safka kugula jiro marka aad safka gashid.
Haddii uu guriga kuu yaallo buug ay maktabaddu leedahay, fadlan ku soo celi iskoolka xilliga aad alaabta qaadaneysid. Haddii waalidku aysan imaan karin maalinka loo qabtay, fadlan wac iskoolkaaga oo farriin dhaaf. Shaqaalaheenna ayaa taleefanka kaaga soo jawaabi doono sida ugu dhaqsaha badan.
Waxaynu u sheegaynaa ardayda ka tirsan kooxaha hoose inay qorsheeyaan inay iskoolka ku soo celiyaan qalabka muusikada haddii uusan jirin qorshe kale oo ay la galeen macallinkooda muusikada.
Dhammaan qalabka muusigada SPPS ee ay haystaan ardayda dhigato fasallada muusikada ee EDL
Ardayda hadda dhigato fasallada 8-aad ee haysta qalab laga leeyahay SPPS
Ardayda hadda dhigato fasallada 5-aad ee St. Paul Music Academy kuwaasoo haysto qalab laga leeyahay SPPS.
Arday walba oo ka tegayo iskoollada kaasoo haysto qalab laga leeyahay SPPS
Arday haysato qalab laga leeyahaySPPS oo u baahan in la dayac-tiro
Dhammaan ardayda fasallada 12-aad ee haysato qalab laga leeyahay SPPS waa inay iskoolkooda ku soo celiyaan qalabkooda markii ay soo celinayaan iPad-ka sida lagu sheegay jadwalka iskoolkooda toddobaadka June 5 ilaa 8.
Dhammaan ardayda kale ee haysato qalabka muusikada ee SPPS way haysan karaan qalabkaas inta lagu maqan yahay fasaxa jiilaalka oo way ku sii tababaran karaan.
Waad ku mahadsan tahay dulqaadkaaga iyo fahankaaga labadii bilood ee la soo dhaafay.
War Cusub oo ku saabsan Waxbarashada Jiilaalka
Maadaama uu socdo saf-marka COVID-19, degmada Saint Paul Public Schools waxay ka xun tahay in ay idin ogeysiiso isbeddel lagu sameeyay barnaamijyadii waxbarashada jiilaalka ee Summer Learning Programs 2020.
Barnaamijyada caadiga u baxo jiilaalka ee PreK-8 (Summer Learning Programs), ayna ka mid yihiin safarradii duurka teendhada laga dhisanayay, lama qabanayo sannadkan.
Fasalladii lagu soo kabayay dhibcaha ardayga ka maqan (Credit Recovery) iyo barnaamijka EL ee luuqadda Ingiriiska waxaa la siin doonaa ardayda hadda dhigato fasallada 9-12. Waxay barnaamijyadan ku bixi doonaan iyadoo la isticmaalayo waxbarashada durugsan.
Lataliyayaasha ardayda ee iskoolka ayaa qorayo ardayda dhigato fasallada 9-12 ee u baahan inay soo kabaan dhibco ka maqan ama ay qaataan maaddada luuqadda Ingiriiska inta uu socdo barnaamijka waxbarashada jiilaalka Saint Paul Public Schools oo ku baxayo isagoo ah waxbarashada durugsan. La xiriir lataliyaha cunuggaaga haddii aadan hubin in cunuggaagu u baahan yahay inuu soo kabo dhibco ka maqan (credit recovery) ama inuu qaato fasalka Ingiriiska.
Maalamaha iskoolka ayaa loo kordhin doonaa (Extended School Year (ESY)) ardayda dhigato fasallada waxbarashada baahiyaha gaarka ah leh, wuxuuna socon doonaa June 15 ilaa July 9 (Isniin ilaa Khamiis) iyagoo isticmaalayo waxbarashada durugsan. Xog dheeraad ah ayaa la la wadaagi doonaa qoysaska ardayda u qalmo barnaamijkan ESY.
Toddobaadyada soo socdo, degmada SPPS waxay bixin doontaa xog quseyso waxbarashada khadka intarnetka ee fasallada PreK ilaa 12, xogtaasoo lagu soo qori doono boggan: spps.org/distancelearning.
Dhammaan ardayda SPPS ee hadda ku qoran sannad-dugsiyeedka 2020-2021 iyo ardayda fasalka 12-aad ee ka qayb-galeyso fasalka lagu soo kabayo dhibcaha iyo fasalka luuqadda Ingiriiska way heysan karaan iPad-kooda inta lagu maqan yahay fasaxa jiilaalka.
Xog Muhiim ah oo Quseysa Isdiiwaangelinta Fasalka 9-aad ee 2020-2021
Qoysaska Ardayda Fasallada 8-aad: Haddii uusan ardaygaagu weli dooran maaddooyinkii uu qaadan lahaa fasalka 9-aad, fadlan ku caawi ardaygaaga inuu buuxiyo isdiiwaangelintiisa iyo xulashada maaddooyinka.
Qoysaska waxay warbixinta qaabka isdiiwaangelinta dugsiyada sare ka heli karaan lifaaqan: Registering for High School link. Fadlan ogow xulashada ardayga ee uu maaddada xushay ma dhammeystirno hadduusan booqan shabakadda iskoolkiisa isagoo iska diiwaangelinayo lifaaqa qaaska ah ee dugsigiisa sare, oo ka dibna raacayo tilmaamaha loo sheegay.
Haddii aad su’aalo qabtid, fadlan la xiriir lataliyaha dugsiga sare ee ardaygaagu tegi doono deyrta.
Ardayda Fasalka 12-aad: iPad iyo Google Doc
Ardayda dhigato fasalka 12-aad meel kale ha ku kaydsadaan wixii ugu jiray Google Drive oo ay rabaan inuusan ka lumin ugu dambeyn July 31, 2020. Wixii ka dambeeyo July 31, dhammaan wixii ku kaydsanaa Google Drive lama heli doono oo waa xirmayaan. Fadlan isticmaal dikumiintagaan si aad u heshid caawinaad: Reference this doc.
Caawinaadda Ramsey County Emergency Assistance
Ramsey County Emergency Assistance waa barnaamij caawiyo qof caruur korinayo iyo dumarka uurka leh. Wuxuu dadka ka caawiyaa kirada guriga/caawinta lacagta aad guriga ku iibsatay (mortgage) iyo lacagaha kuleeliyaha, korontada, iyo biyaha. Si aad Ramsey County uga codsatid caawinaad degdeg ah, fadlan wac 651-266-4444.